/ Degidda xarumaha hey’adda laanta socdaalka dadka
Waxaa lagu dejinayaa meesha uu boos ka bannaanyahay
Qolka waa lagula qeybsanayaa
Haddii aad adigu u aragto in laguu hanjabey, lagu khasbay ama si kale dhibaato laguugu geystey waxaad kala hadlikartaa shaqaalaha guryaha qaabilsan ama qaybta adiga ku qaabilsan. Waxaad kaloo arrintaa kala hadlikartaa ururada sida madaxa banaan u shaqeeya haddii ay joogaan meesha aad adigu deggen tahay. Haddii aad rabto inaad dacwad soo gudbiso waxaad wacaysaa booliiska lambarka 11414. Haddii ay arrintu degdeg tahay (akut) waxaad wacaysaa 112.
Khadka ilaalinta dumarka wuxuu qofka dumarka ah siinayaa tallooyin iyo caawimo haddii laguu hanjabo ama jirdil lagugu sameeyo, dhinaca maxkaxda ama galmo lagugu khasbo. Soo wac 020-505050. Dhowr daqiiqo kadib turjubaan ayay kuu qabanayaan. Waxaad kaloo warbixin intaa dheer ka akhrisankartaa bogga internetka ee kvinnofridslinjen.se. Waxa ku jira macluumaadyo ku qoran luqado kala duwan.
Alaabada aad adigu leedahay
Booska sida wadajirka ha loo leeyahay
Lama oggola in aad xayawaan guriga ku haysato
kala saar qashikaaga. Waa inaad qashinka kukala soocdo meelaha qashinka loogu talogalay. Waxa adiga warbixin ku siinaya shaqaalaha Hey’adda laanta socdaalka ama shirkaga guriga iska leh sida ay arrintaasi kuga shaqaynayso guri aad deggen tahay
shaqaalaha Hey’adda laanta socdaalku waxay kaantaroolidoonaan guriga iyo alaabada hoostaala iyo weliba qalabka kale si ay u fiiriyaan inuu qalabkii loogu talogalay oo dhami yaalo isla markaana ay fiican yihiin si uu qofkale guriga ugu soo guuro
inaad guriga nadiifiso markaad adigu guurayso.
sii qaado wixii alaabo ah ee aad adigu leedahay. Lama hubo inaad dib u heleyso alaabo aad ka tagtay markii aad guriga ka guurtay ama haddii ay Hey’adda laanta socdaalku kaa saarto sistamka. Wixii la ilaawo ama wixii alaabo ah ee laga tago waa la tuurayaa, qofkale ayaa lagu caawinayaa ama booliiska ayaa loo gudbinayaa sidii alaabo la helay oo kale.
u dhiib furaha shaqaalaha Hey’adda laanta socdaalka.
Guriga waa lagaa joojinayaa